Nhau - Maitiro ekupisa ekunze kwe LED kuratidza zvinobudirira
Nekuda kwemazana mapikisheni e LED kuratidza, ine kupisa kukuru. Kana ikashandiswa panze kwenguva yakareba, tembiricha yemukati inosungirwa kusimuka zvishoma nezvishoma. Kunyanya, kupisa kupisa kwenzvimbo hombe [yekunze LED kuratidza] rave dambudziko rinofanirwa kutariswa. Iko kupisa kupisa kwe LED kuratidza zvisina kunangana kunokanganisa hupenyu hwebasa rekuratidzira kwe LED, uye kunyange zvinokanganisa zvakananga iko kwakajairwa kushandiswa uye chengetedzo ye LED kuratidza. Maitiro ekupisa ekuratidzira skrini rave dambudziko rinofanirwa kutariswa.
Kune nzira nhatu dzekutanga dzekufambisa kupisa: kuitisa, convection uye radiation.
Kudziya kwekupisa: gasi kupisa conduction mhedzisiro yekurovera pakati pegasi mamorekuru mukufamba zvisina kufanira. Iko kupisa kupisa mukati mesimbi kondakita kunonyanya kuitiswa nekufamba kwemahara maerekitironi. Iyo yekudziya conduction mune isiri-inoitisa yakasimba inoonekwa nekudengenyeka kweiyo lattice chimiro. Iyo michina yekupisa conduction mune mvura zvakanyanya zvinoenderana nekuita kweiyo elastic wave.
Convection: zvinoreva kupisa kwekupisa kunokonzerwa neiyo hama kutama pakati pezvikamu zvemvura. Convection inongowanikwa mune inoyerera uye zvinonzwisisika ichiperekedzwa nekupisa conduction. Iko kupisa kwekuchinjana kweyekuyerera inoyerera kuburikidza pamusoro pechinhu inonzi inoratidzira kupisa kupisa kutapudza. Iyo convection inokonzerwa neakasiyana density yeanopisa uye anotonhora mativi emvura anonzi echisikigo convection. Kana kufamba kwemvura kuchikonzerwa nechokunze simba (fan, nezvimwewo), inonzi inomanikidzwa convection.
Radiation: maitiro ekuti chinhu chinochinjisa kugona kwayo muchimiro chemagetsi emagetsi inonzi kupisa kwemhepo. Radiant simba rinoendesa simba muvhavha, uye kune simba fomu shanduko, ndiko kuti, kupisa simba inoshandurwa kuita inopenya simba uye inopenya simba inoshandurwa kuita kupisa simba.
Izvi zvinotevera zvinhu zvinofanirwa kutariswa pakusarudza iyo kupisa dissipation mode: kupisa kupisa, kuwanda kwesimba simba, simba rese rekushandisa, nzvimbo yepamusoro, vhoriyamu, mamiriro ekushandira mamiriro (tembiricha, mwando, kumanikidza kwemhepo, guruva, nezvimwewo).
Zvinoenderana nehunhu hwekuchinjisa kupisa, pane kutonhorera kwechisikigo, kumanikidzwa kutonhorera kwemhepo, kutonhodza kwemvura kwakadzika, kutonhora kwemhepo, kutonhora kwethermoelectric, kupisa pombi kupisa kupisa uye dzimwe nzira dzekupisa kupisa.
Kupisa kupisa dhizaini nzira
Iyo yekupisa yekuchinjana nzvimbo yekupisa emagetsi zvikamu uye mweya inotonhorera, uye iyo tembiricha mutsauko pakati pekupisa zvemagetsi zvikamu nemhepo inotonhorera zvinokanganisa zvakananga kupisa kupisa kupera. Izvi zvinosanganisira dhizaini yemhepo vhoriyamu uye dhizaini yemhepo mukati me LED inoratidzira bhokisi. Mukugadzirwa kwenzvimbo dzinofefetedza mweya, pombi dzakatwasuka dzinofanirwa kushandiswa kuendesa mweya kure sezvinobvira, uye kupinza kwakakombama uye kukombama kunofanira kudzivirirwa. Nzira dzekufefetedza mweya dzinofanirwa kudzivirira kuwedzera nekukasira kana kuomesa. Iyo yekuwedzera kona haifanirwe kudarika 20O, uye kona yekudzora haifanire kupfuura 60o. Iyo pombi yekufefetera inofanirwa kuvharwa kusvika pese pazvinogona, uye matinji ese anofanira kunge ari munzira yekuyerera.
Bhokisi dhizaini kufunga
Iyo gomba remhepo rinofanira kuiswa pazasi rebhokisi, asi kwete pasi zvakanyanya, kuitira kudzivirira tsvina nemvura kupinda mubhokisi rakaiswa pasi.
Iyo mhepo inofanirwa kuiswa padivi repamusoro padyo nebhokisi.
Mhepo inofanirwa kutenderera kubva pasi kusvika kumusoro kwebhokisi, uye yakakosha mweya inlet kana yekuzadza gomba inofanira kushandiswa.
Mhepo inotonhora inofanirwa kubvumidzwa kuyerera kuburikidza nemidziyo yemagetsi inodziya, uye dunhu pfupi rekuyerera kwemhepo rinofanira kudzivirirwa panguva imwe chete.
Inlet yemhepo uye nzira yekubudisira inofanirwa kuve yakagadzirirwa firita skrini yekudzivirira kusvibiswa kupinda mubhokisi.
Iyo dhizaini inofanirwa kugadzira yakasikwa convection inobatsira kumanikidza convection
Dhizaini inofanirwa kuona kuti mhepo inopinda uye chiteshi chengarava chiri kure kubva kune mumwe nemumwe. Dzivisa kushandiswazve kwemhepo inotonhora.
Kuti uve nechokwadi chekuti iko kunongedzwa kweiyo radiator slot kwakafanana nekwakanongedzwa nemhepo, iyo radiator slot haigoni kuvhara nzira yemhepo.
Kana iyo fan ikaiswa mune ino sisitimu, iyo yekupinda mweya uye nzira yekubuda inowanzovharwa nekuda kwekuganhurirwa kwechimiro, uye iko kuita kwayo curve kuchachinja. Zvinoenderana neruzivo rwekuita, iyo yekupinda mweya uye yekubuda kweiyo fan inofanirwa kunge iri 40mm kure nechipingamupinyi. Kana paine kukamurwa kwenzvimbo, inofanira kunge iri makumi maviri.